Shina malalaka lay vita amin'ny vinina mpamokatra sy mpamatsy | Karlter
Warranty 6 taona mahery
tombony Tsy tantera-drano
Fitsaboana ambonin'ny tany UV coating
Karazana vokatra Loose lay Vinyl Plank
Surface embossing lalina / tanana voafafa
Fametrahana Loose lay
Manaova Layer 0,3 / 0,5 mm
Size 9 ”x48”
taratasy fanamarinana CE / SGS
Fonosana Carton + pallet
Aiza no azo ampiasaina Loose Lay?
Lakozia, efitrano fidiovana, efitrano fandraisam-bahiny, gym, efitrano, efitrano fandriana, fianarana sy lakaly
Loose Lay dia mametraka mora foana amin'ny rindrina ambany, malefaka, maina ary vovoka. Ny lozy vita amin'ny visy lazy loose dia novolavolaina mba hampihenana ny fotoana fametrahana ary ahafahana miditra amin'ireo fitaovana ambanin'ny tany. Eo ambanin'ny toe-javatra mety dia azo apetraka eo amin'ny gorodona ambany ireo taila ireo nefa tsy misy dity. Izany dia manampy amin'ny fanaovana azy ireo ho safidy fametrahana mora ho an'ny olona sy ny olon-drehetra.
Bebe kokoa momba ny Loose Lay
Loose Lay Vinyl Planks dia mahitsizoro vinyl matevina miaraka amina lamosina miorina amin'ny faritra malama.
Ny mahatonga ny Loose Lay Vinyl Planks tsy hitovizany amin'ny vokatra hafa dia ny tsy mila fasteners, adhesive, na lela sy groove mba hitazonana ny hazo fisaka. Ireo zana-kazo vita amin'ny vina vita amin'ny vinaola matevina dia mipetraka eo amin'ny tany ary mijanona eo rehefa apetraka.
Ity karazana gorodona vita amin'ny vinina ity dia azo apetraka eo ambonin'ny gorodona efa tena tsotra sy haingana.
Ny fizotry ny fametrahana ny loose vinyl plank
Ny lamosin'ny Loose Lay Vinyl Planks dia mampiasa friksi mba hahazoana ny tany ambanin'ny ambany. Mila omanina ny gorodona ary tokony ho maina, malama, avo lenta, madio ary tsy misy vovoka. Ny fametrahana fotsiny dia mila mametraka ny Loose Lay Vinyl Flooring amin'ny toerana misy azy ary manome antoka fa misy fifamatorana mafy eo anelanelan'ny hazo fisaka sy ny rindrina.
Ny fanapahana ny zana-kazo mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara ireo sanganasa farany. Na izany aza tsy mila fiofanana manokana hanaovana izany.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny vatan-kazo lava vita amin'ny volo
Ny Loose Lay Vinyl Flooring dia nanjary safidy malaza noho ny tombontsoa mahaliana atolotray azy.
Araka ny efa voalaza dia mora apetraka ity karazana gorodona ity. Tsy ilaina ny lakaoly, staples, na rafitra fanidiana hidin-trano. Ireo mpiorina dia mametraka fotsiny ny zana-kazo amin'ny toerany. Noho ny fahamoran'ny fametrahana azy dia tsy mila fotoana firy amin'ny famitana ny asa ary mahazatra ny mandoa kely noho izany.
Ny fisongadinan'ity vahaolana amin'ny gorodona ity dia ny fitaterana azy. Afaka esorina izy io ary apetraka amin'ny toerana hafa mora foana. Ny ankamaroan'ny vahaolana amin'ny gorodona hafa dia tsy manome izany tombony izany.
Ny fananana an'io safidy io dia midika fa azonao atao ny mamindra ireo zana-kazo ireo amin'ny efitrano samihafa na mitondra ity gorodona ity miaraka aminao raha mifindra trano ianao, mamorona fahafaha-manao famolavolana anatiny ary mety hitahiry vola mandritra ny fotoana maharitra.
Teo aloha: lakaoly ambany gorodona vinyl